musha / Interior design / Plaster Lines, Iyo Inofanirwa kunge Yakagadzirwa Saizvozvi!
2021 / 06 / 18 kupatsanuraInterior design 6406 0
Plaster mitsara, inoshanda uye inoyevedza yemukati yekushongedza zvinhu. Iko kuvapo muchimiro chemitsetse kune yakasimba kuratidza kunetsekana, uye yayo yakasarudzika moto, hunyoro, kupisa, acoustic uye kupisa kupisa mabasa anoita kuti ive inonyanya kufarirwa. Iyo ichangoburwa dhizaini ingave minimalist kana yakapusa yemhando yepamusoro, kwese kwaunogona kuona chimiro cheplaster mutsetse, saka sei chaizvo iyo plaster mutsara dhizaini? Ichi chinyorwa chinoongorora magadzirirwo epurasita mutsara kubva pamakona anotevera.
Rudzi rweplaster mutsara
Iyo dhizaini fomu yeplaster mutsara
Zvakanakira nekukanganisa kwepurasita mutsara
Kuvaka nzvimbo dzeplaster mutsetse
Mhando dzeplaster mutsara
Kune akawanda marudzi epurasita mitsara
Iwo akajairika ndeaya gypsum kona mutsara, gypsum yakati sandara mutsetse, gypsum kona ruva uye gypsum mwenje wepaneru
a. Gypsum kona mutsara
Makona epurasita kana makona epurasita anoshandiswa ega mudenga nemadziro echivako chekutanga, kunyanya mumaAmerican, eEuropean uye masitayera erustic. Ehezve, kune vanhu vazhinji vanofunga kuti kwese kushongedzwa kunoda kuita yepamusoro kona kona, kazhinji inosarudza chimiro chakareruka chetambo. Kana iwe ukasarudza mamwe mitsara yakaoma, akapfuma mapatani, iwe unogona zvakare kuona iyo yevharo chivharo, skirting zvakare iine mitsara inoenderana nechimiro.
Basa repamusoro rekona mutsara & kushandiswa kwakajairika
Kuita kuri kushomeka mitsara yakaoma yedenga nemadziro, uchitamba chinzvimbo.
Inogona kuvhara chivakwa pachayo siringi uye madziro emakona haana kutwasuka, ane bumpy uye anodonhedza, viga zvakashata.
Ehe dzimwe tambo dzisinganetsi slot, dzinogona kuvanzwa mune iyo slot kuseri kwemutsara wepamusoro wekona.
Vamwe vanhu vanotsanangudza kumadziro ane mavara latex pendi uye chena siringi neiyo yepamusoro kona kona kufambisa kuvaka, hutungamiriri.
Mutsara wepamusoro wekona unogona kukandwa uye kushandiswa kugadzirisa pfungwa yekukanganiswa kwakaumbwa nedenga remazinga.
Mune mamwe makabati ari kumusoro, keteni bhokisi rinoshandiswa zvakare (isiri-plaster zvinhu, MDF kana huni yakasimba).
Nguva zhinji mutsara wepamusoro wekona hausi wega, unozoshandiswa netambo yakatetepa, mutsetse wemaruva, tambo yekuvhara uye zvichingodaro. Mune imwe siringi yakaoma kana yakaoma yekushongedza dhizaini inodurura inotaridzika chaizvo, nekuti mimwe mitsara haipo. Semuenzaniso, mamwe madhiringi anodonhedza anoshandisa iyo yakati sandara mutsetse, uye musanganiswa weakasiyana maratidziro epamusoro kona yekona, yin kona mutsara, yang kona mutsetse, hafu-kutenderera mutsetse wakasimudzwa. Yin kona mutsara uye kona yekona kazhinji hazvishandisirwe zvega, zvakanyanya mukutungamirwa kwekushandisa kwekuvhara, asi zvakare kuwedzera pfungwa yehutatu-hutatu hutongi.
b. Plaster yakati mutsetse mutsara
Flat mitsara mitsara inogona kushandiswa mumadziro uye sirin'i mitsara yemhando dzakasiyana, inogona kutemerwa zvinoenderana nemaitiro, ese ari nyore uye akajeka, uye anogona kuve akaomarara uye akasiyana. Basa guru nderekuridza maitiro ekushongedza, kupa rusvingo rusina chinhu kana pamusoro pevhu rakapfuma mumatatu-mativi pfungwa, kusimudzira hunyanzvi mhando yenzvimbo.
c. Plaster kona ruva
Inowanzo shandiswa pamharadzano yematanho maviri akatwasuka akatwasuka, ayo akapfava uye ari nyore kwazvo kugadzira pfungwa yekunaka uye yepamusoro kirasi pamadziro. Iyo inotongwa neEuropean American dhizaini, rustic yakapusa eEurope maitiro. Kune chimiro chakatemerwa, vanhu vazhinji vanofunga kuti hazvisi nyore kutarisira, saka kutsvaga kwekureruka kweboka revashandisi kazhinji hakusarudze. Ikozvino inozivikanwa vintage dhizaini, edza kushandisa iyi tambo kuenzanisa, kushandiswa kwemuno kunogona kunyatso kusimudzira pfungwa yekugadzira.
d. Plaster mwenje wepaneru
Mune dhizaini ine main light, mazhinji maEuropean nemaAmerican maitiro anozoiswa pakati pekamuri plaster discs, yekushongedza basa. Ichaisawo mwenje yakanangana pano kuti iwedzere kunaka kwekushongedza kwepamusoro pekunze uye kuburitsa iyo mitatu-mativi pfungwa.
Chimiro cheplaster mutsara
Nezve dhizaini yematare ekunamatira muchimiro, kune akawanda magadzirirwo angangoita eiyo fomu iri pamadziro, kunyanya anoshandiswa muchimiro chemashure. Kune yekutandarira yemba yekutandarira kana yekurara kumashure, dhizaini yepurasita mufomu inonyanyo kuve yakakamurwa muzvikamu zvinotevera. Ehezve, pamwe nekuwedzera kwekugadzira uye fungidziro yevagadziri, mitsara yepurasita inogona zvakare kugadziridzwa kuti ive yakasarudzika dhizaini.
Iyo yakapusa tambo chimiro inonyanya kukodzera kune minimalist dhizaini dhizaini. Iwo madziro anobva ashongedzwa nemadziro emadziro, marambi emadziro kana maTV akarembera pasina kutarisa kunze kwenzvimbo.
Iyo yakaoma kunzwisisa tambo chimiro kazhinji haisi mune yekushongedza kweimwe accessories. Mamwe maumbirwo anogona kuenzaniswa neEuropean dhizaini yemoto kuratidza pfungwa yayo yeumbozha.
Muzhinji, iyo plaster mutsetse ichave yakapendwa pamwe neruvara rwemadziro kuita kuti iro rose rinotaridzika kuve rakabatana. Mukusarudza kwekuenzanisira, inogona zvakare kunge yakati sandara mutsetse, ruva rekona, mutsetse wekona uye zvimwe zvinoenzanisira modelling, pamwe chete kuratidza mhedzisiro yemadziro.
a. Zvakanakira plaster mutsetse
(1) Mutengo wakachipa. Iyo yakachipa pane ese marudzi emitsetse, munhu wese anogona kuwana.
(2) Yemafashoni uye akasiyana-siyana. Mutsara uri nyore uye wakajeka, zvine hunyanzvi, kungave neazvino kana kupenya kwekureruka, kana kunyangwe minimalist, inogona kuve yakatanhamara.
(3) nyore kuvaka. Bonding uye splicing tekinoroji haisi kuda, zviri nyore kupedzisa, iine hushoma hushoma.
(4) Yakasimba yekushongedza mhedzisiro. Iko hakuna chete kwakasiyana mhando dzemapatani, asi zvakare akasiyana mapatani anogona kuvezwa zvinoenderana nezvako zvaunofarira. Mushure meratidziro yepurasita yakakwenenzverwa, pamusoro pacho panotsvedzerera uye pfava, izvo zvinogona kukonzeresa zvakanyanya kukanganisa chiratidzo chevanhu.
b. Zvakaipira plaster mutsara
(1) iyo tembiricha mutsauko wepurasita inokonzeresa deformation uye kutsemuka, nemvura inoumba, chisingaperi chichava rima.
(2) plaster tambo inorema, isina kusimba uye yakaputsika, pane tambo yegirazi mukati, mune yekuchengetedza mashandiro ari mashoma.
(3) Nekufamba kwenguva, mitsara yeplasta iri inowanzo nyorova uye yero.
(4) Dura inogona kugadzira micheka yakanaka uye guruva, izvo zvinogona kukuvadza mweya wekufema.
Kuvaka mapoinzi epurasita mitsara
(1) Base kurapwa munzvimbo, chete huswa-midzi kurapwa ndiko kune yakajairwa, ndeyekuona kuti iyo plaster mutsetse kuvaka kuri kune yakajairwa yakakosha prerequisite.
Ungatariswe sei kusvika pachiyero? Chekutanga pane zvese, iro remadziro emadziro rinofanira kuongororwa nemutongi mushure mekugadziriswa, ichiteverwa nepamusoro penzvimbo yemadziro yakakwenenzverwa ka2 putty. Kutaridzika kwepamusoro kwakadzikama pasina kubuda kana kuumbika zvikamu, chete kuti uite izvi kuti uve nechokwadi cheiyo yekupedzisira plaster mutsara kuvaka mune yekutanga nhanho. Dzimwe nzira dzekuvaka uye zviyero zvekuvaka, bata pano kuti udzidze zvimwe: iyo chaiyo chiitiko haigone kudzosera chiitiko? Pakupedzisira, dambudziko raani!
(2) Plaster mutsara wekuvaka odha: kuvaka kutanga kubva kumberi. Ingoita saizvozvo kuti uve nechokwadi chekuti kumberi kushoma kwakabatana, woisa zvishoma hafu yechikamu muzvikamu zvisingaonekwe.
(3) Kuvaka kuita nekukurumidza kunamatira nekukurumidza kugadzirisa, uku uchigadzirisa uye kugadzirisa. Mushure mekugadzirisa mune ipfupi nguva inokwanisika yekuzadza nzvimbo munzvimbo, kuchenesa nzvimbo yacho, uye wozochenesa nemvura yakachena kuti uone kuti iyo yekushongedza nzvimbo yakachena uye yakachena.
(4) Makona uye nhengo dzakabatana ndizvo zviri pamberi pekuvaka. Basa rakaitwa zvakanaka kana kwete, kubva pano inogona kuwanikwa nyore. Kazhinji kupurasita mutsetse majoini zvikamu zvinofanirwa kuve zvakaraswa plaster, uyezve but up kumusoro, garo teerera kune kana iro patani iri iro, kukwirira kwacho kunoenderana zvakakwana. Chechipiri ndechekuti plaster tambo yakazara kune tambo haigone kuerekana yapinda uye kunze kwemadziro kuti itevere. Zvikamu zvakaderera zvinodikanwa kuti zvishandise purasita padhi kuti itwasuke. Chekupedzisira, kushandiswa kwemvura yakachena kunove yakachena purasita mutsetse wepasita, kuitira kuti usazokwanisa kuchenesa gare gare.
(5) Kugadziridza matara, ino poindi inoda vapendi kuti vapedze. Mushure mepurasita, vapendi vanogadzirisa chikamu chejoinhi chetambo zvakare kuti vabudirire chikamu chejojo ​​chinopera, zvekuti zvinonetsa kuwana. Zvakare, pamusoro penzvimbo yemadziro inogadziriswa kuona kuti hupamhi hwetambo yepurasita kunze kwezvikamu zvemadziro zvakafanana.
(6) Brush latex pendi. Zvakajairika tsika kukwesha primer, uyezve kukwesha majasi maviri ejasi. Kana uchivaka, unofanirwa kutarisa vashandi. Parizvino, vashandi vazhinji vari kungotsvaira majasi maviri epende. Kuenderana kwependi kunofanirwa kuenderana nemirairo yekuvaka. Kana yakatetepa zvakanyanya, zvichave nyore kuramba uchidonha. Kana iri yakanyanya kukora, iyo yekumusoro pendi inoyerera haina kusimba, uye pamusoro haina kutsetseka.
(7) Wallpaper pamadziro. Paunenge uchigadzira Wallpaper, ita shuwa yekuraira vashandi vemu Wallpaper kuti vatsvage kuchenesa iro girazi remadziro pamutsetse wegonhi repasita. Zvikasadaro, gare gare pane iyo latex pende ichasiya rima mucherechedzo unokanganisa kushongedza kwesimba kwerex pende.
Chekupedzisira, chati yekupfupisa zvirimo nhasi.
Pakapfuura :: Tsvaga Inzvimbo Yakanaka MuNyika Yezvisikwa | Taiguk Shapeshang Zvadaro: Kudzoka Kwakakwana Kwemhuri Yakaumbwa-neBara, Super Yakavanzika Nzvimbo Kugadzira Imba "Inofadza"!